Khabiirka Kala Duwan: Siyaabaha Suuq-geynta ee Deegaanka Loogu Noqon Karo White
Ganacsi kasta wuxuu ka faa'iideysan karaa helitaanka bogga guuleysta. Natiijo ahaan, waxaa lagama maarmaan u ah badi websaydhka in ay ku daraan istaraatijiyad suuq-gare ah oo leh websaydh kaas oo gaari kara dad badan. Internetku wuxuu ku siinayaa dhammaan iibiyeyaasha goobo wadaag ah oo lagu iibiyo ganacsigooda iyo sidoo kale samaynta isbeddelo kale oo muhiim ah oo ku saabsan waxqabadka shabakaddooda - covera solutions inc. Mashiinka raadinta ee deegaanka mashiinka raadinta farsamooyinka suuq-geynta ayaa ka dhigi kara bogga inuu helo darajo wanaagsan SERP ee ereyada muhiimka ah. Xaaladdani waa wadnaha qorshe kasta oo suuq-geynta ah. Inta badan wakaaladaha SEO iyo macaamiisha ayaa laga yaabaa inay bixiyaan qodobbo ku wajahan SEO-ga maxaliga ah iyo sidoo kale badiyaaba farsamooyinka suuq geynta
Search Engine Optimization (SEO) sidoo kale waxay noqon kartaa arrin wax ku ool ah in sameynta website ay gaarto hadafyada la doonayo. Tusaale ahaan, shirkadaha intooda badan waxay la kulmaan kharajahooda iibkooda bartilmaameedka iyada oo loo marayo suuq-geynta raadinta deegaanka. Nidaamkani waa qaab ka mid ah koofiyado caddaan ah oo SEO ah taasoo micnaheedu yahay in ay ku dhacdo xeerarka samaynta ololeyaal suuq-gaas oo guuleysta. Waxaa sidoo kale jira kiisas badan oo dad ah oo wax ka beddelaya ololayaasha suuq-galka ee online-ka ah sababtoo ah suurtagalnimada in iibka weyn laga helo fursadan. Waxaa jira sababo badan oo keeni kara SEO-ga maxaliga ah qaabka kumbiyuutarka cad.
Michael Brown, Maareeyaha Guusha Macaamiisha ee
Samaynta bogga isboortiga bogga waa hab farsamoyaqaan cad ah kaas oo samayn kara shabakad amni ah oo joogto ah oo internetka ah iyo sidoo kale xiriir muddo dheer ah oo lala yeesho macaamiisha. Inta badan dadka isticmaala internetka waxay isticmaalaan moobaylka. Saacadaha casriga ah ayaa dhawaan ku beddeli doona kombuyuutarrada casriga ah gaar ahaan guud ahaan kormeerida iyo baaritaanka internetka. Bixiyeyaasha internetka waa inay sameeyaan boggooda internetka si ay u samaystaan ​​kuwa soo booqda kuwaas oo gaari doona mawduucooda ka soo jeeda smartphone waxay leeyihiin khibrad fiican. Intaas waxaa sii dheer, Google ayaa isbeddelkan ku sameeyay qaabka ay Penguin algorithm bishii Janaayo 2017. Is-beddelkan waxaa loola jeedaa in samaynta bogga internet-ka ah ee saaxiibtinimo ay noqon doonto arrin wanaagsan oo la tixgeliyo.
Khibrada isticmaalaha waxay sharaxeysaa guusha website-kaaga. Tusaale ahaan, websaydh kaas oo dadka isticmaala dareemaya wanaag ayaa ka dhigaya mid mid leh wakhti firfircoon oo dheeraad ah oo leh mid aan lahayn UX. Sidoo kale, jawaabta dadka ee UX-gaaga ayaa leh wax la xiriira jagada mareegtani internetka ayaa ku jiri doonta liiska. Waxaa lagama maarmaan ah in la qaato interface interface user kaas oo ku qasban waqti isku mid ah. Qaar badan oo ka mid ah suuq-geynta suuqa mira-gashiga gudaha ayaa xirfad-gudanaya ku wareegaya samaynta booqdaha dareemidda qanacsanaanta markaad internetka ka eegayso waxyaabo kala duwan.
Internetku wuxuu leeyahay dalabyo badan oo loogu talagalay qof doonayo inuu samaysto maalgashi lagama maarmaan ah. Tusaale ahaan, ganacsiyadu waxay abuuri karaan bogag internet ah oo leh sumcad beerta ay ka shaqeeyaan. Xaaladaha kale, shirkadaha waxay ku raaxaystaan ​​faa'iidooyinka dhaqdhaqaaqa suuq-geynta boodhka deegaanka. Qaar ka mid ah hay'adaha SEO ee ka caawin kara shirkada leh suuq-geynta onlineka waxaa ku jiri kara hababka sida cilmi-baarista muhiimka ah iyo dib-u-qabsiga. Shaqooyinka SEO-ga waa sharci, dadku waxay tixgeliyaan xeeladaha khadadka cad, kuwaas oo faa'iidooyin badan u leh qofka isticmaalaya.